SMX Wakhtiga Dheeriga ah: Abuuritaanka istaraatiijiyad nuxurka ugu horraysa ee muuqaalka ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/SMX wakhtiga dheeraadka ah: Abuuritaanka istaraatiijiyad ka kooban muuqaal-koowaad
SMX wakhtiga dheeraadka ah: Abuuritaanka istaraatiijiyad ka kooban muuqaal-koowaad
Bishii hore waxaan ka hadlay laba kulan oo ku yaal SMX West oo ku saabsan YouTube iyo muuqaalka SEO. Halkan waxaan kaga jawaabayaa qaar ka mid ah su'aalaha dhageystayaasha la i weydiiyay, iyo sidoo kale wax ka qabashada qaar ka mid ah su'aalaha ugu dambeeyay ee ka soo baxay xaaladda hadda jirta ee fogeynta bulshada.
Maxay yihiin talooyinka aad haysatid ee ku saabsan helitaanka shirkad iibsi si ay u yeelato joogitaanka YouTube?
Waxaa jira tiro tirooyin ah oo ku saabsan sida fiidyowga iyo YouTube ay u yihiin goobo waaweyn oo leh taraafikada. Waxaan jeclahay in aan tilmaamo saddex faa'iidooyin oo la taaban karo.
Mid ka mid ah, iyada oo Google ay xoogga saarayso carousel-ka fiidiyaha ee SERP (55% raadinta waxay leeyihiin fiidiyoow), fiidiyowyadu waa hab fiican oo aad ku boodi karto meesha ugu sareysa ee eraygaaga muhiimka ah. Laba, waa hab fiican oo lagu gaadho dhagaystayaal cusub (daawadeyaashu 3x ayay u badan tahay inay daawadaan muuqaal la xidhiidha danahooda oo muujinaya shakhsiyad caan ah). Saddex, si ka duwan shabakadaha kale ee bulshada ee lacagta lagu ciyaaro, fiidiyowyada YouTube waxay leeyihiin dabo dheer oo aad u weyn, gaar ahaan haddii xogtooda badan la hagaajiyo (70% waxa ay dadku daawadaan waxaa go'aamiya talada YouTube).
Taasi waxay tidhi, waa muhiim in la dejiyo filashooyinka ku habboon. Fiidiyowyada YouTube ma laha ROI toos ah oo la mid ah sida socodsiinta xayeysiinta Facebook iyo in la arko inta iib ee ay soo saartay. YouTube waa ciyaar dheer oo u baahan joogtayn laakiin soo celin karta faa'iido weyn.
Abuuritaanka fiidyowyada si toos ah loo soo saaray ee sawirada jira miyay tahay xeelad wax ku ool ah (tusaale ahaan, samaynta safar dalwad ah oo guriga ah oo laga sameeyay sawir-qaadaha)?
Markaad abuurayso nuxurka YouTube, waxaad doonaysaa inaad naftaada geliso kabaha daawadayaasha. "Miyaan daawan lahaa kan haddii aan ku arko YouTube?" Sidoo kale, is weydii haddii muuqaalku yahay dhexdhexaadiyaha saxda ah.
Malaha dadka kaliya ee daawan lahaa dalxiiska slideshow ee guri waa dadka suuqa u jooga inay iibsadaan gurigaas. Laakiin waxay u badan tahay inay ka daawan lahaayeen fiidiyowga bogga liiska oo aanay si dabiici ah uga daawanayn YouTube. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya madal fiidiyoow ah oo martigelinaysa.
Taas macnaheedu maaha in aanay jirin boos loogu tamashlo tago YouTube. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad keento qiimo - sida socdaal laga sheekeeyay faa'iidooyinka liiska ama toogashada fiidyowga loogu talagalay liisaska miisaaniyada sare (Kanaalka Erik Conover wuxuu leeyahay fiidiyoow liiska raaxada ah iyo 1 milyan oo macaamiil ah).
Kanaalka sumadda YouTube-ka waxa uu leeyahay ilaa 1,200 fiidyow oo aan SEO-ga la hagaajin. Miyaynu mudnaanta siinaa dib ugu noqoshada iyo ku wanaajinta ereyada muhiimka ah ama kaliya aan diirada saarno fiidiyowyada cusub?
Haa labadaba - laakiin waxaad rabtaa inaad caqli ku yeelato. Markaad haysato qadar aad u badan oo ka kooban waxaad haysataa xog aad u badan oo ku saabsan noocyada ka kooban ee si fiican u shaqeeya oo ku xidha dhagaystayaashaada si aad u ogeysiiso abuurista fiidiyowyada mustaqbalka.
Buug-yaraha dambe ee 1,200 fiidiyow ayaa dhibaato weyn ku ah xeerka 80/20. Fursadaha ayaa ah ilaa 20% fiidyowyadaadu inay wadaan inta badan daawashada iyo wakhtiga daawashada kanaalkaaga. U tag falanqayntaada oo hel fiidiyowyada leh tirinta aragti sare iyo boqolkiiba sare ee la daawaday.
Fiidiyowyada boqolkiiba sare la daawaday (macnaheedu waa dadku waxay daawadeen inta badan muqaalka) laakiin aragtida hoose ayaa ah kuwa ugu fiican ee lagu bilaabo sababtoo ah waxay la macno tahay waxa ku jira runtii waa wanaagsan yahay laakiin dadku ma helayaan.
Kadibna diirada saar inaad wanaajiso muuqaalada kale ee sare / boqolkiiba sare ee la daawaday. Ka dib u fidi macluumaadkaaga intiisa kale (xaaladaha qaarkood oo leh muuqaalo duug ah ama eber ah, waxa laga yaabaa inay fiican tahay in guriga la nadiifiyo oo laga saaro).
TubeBuddy iyo VidIQ labaduba waxay leeyihiin astaamo tafatirka dufcaddii kuwaas oo sidoo kale gacan ka geysan kara samaynta isbeddellada metadata si dhakhso ah. Waxaan haystaa maqaal dhan oo ku saabsan cusboonaysiinta fiidyaha ee qalabkan.
Google miyay u eegtaa fiidyowga is-martigeliyay ee ku yaal boggayaga si ka duwan fiidyaha aan ku hayno YouTube?
Haddii aad soo geliyaan muuqaal isku mid ah YouTube-ka iyo nooc is-martigeliyay oo ku yaal boggaaga, Google wuxuu u eegi doonaa sidii laba muuqaal oo kala duwan. Google xitaa uma aqoonsan doono boggaaga fiidyaha iskii isu abaabulay inuu yahay muuqaal ahaan ilaa bogga ay ku dhex-xidhan tahay aanu lahayn calaamadaynta shayga fiidyaha ee habboon.
Inta badan, waxaan u doodi lahaa inaan ku dhejiyo hal madal muuqaal kasta oo gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, hal kiis oo faa'iido leh oo la isticmaalo ayaa noqon lahaa haddii fiidiyahaagu uu beegsanayo erey muhiim ah oo aad u fudud Google. Waxaad heli kartaa fiidyahaaga YouTube-ka iyo fiidyahaaga is-martigeliyay si aad uga dhex muuqato carousel-ka-guuleysiga laba jeer!
Maxay yihiin fikradaha ku saabsan u adeegsiga YouTube ka ahaan goobta martigelinta fiidiyowyada ka dambeeya darbiga lacag bixinta ee goobta xubinnimada?
YouTube si fiican ayuu ugu shaqeeyaa fiidyaha dadweynaha Ma aha goobta ugu fiican ee lagu marti geliyo fiidiyowyada gaarka ah mareegahaaga gadaashiisa paywall.
In kasta oo farsamo ahaan la samayn karo iyadoo dejinaysa goobaha gaarka ah ee aan liiska ku jirin, YouTube waxay bixisaa kontorool aad u yar oo ku saabsan sida ciyaartoygu u ekaado, waxa isticmaaluhu ku samayn karo fiidiyowga, iyo waxa dhacaya ka dib marka fiidiyowgu dhammaado.
Goobta xubinnimada, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho wax sida Vimeo ama Brightcove.
Waa inaan baabi'inay dhacdadayada shaqsi ahaaneed COVID-19 dartiis. Miyaynu dib u dhignaa sanadka soo socda ama ma isticmaalnaa baahinta tooska ah si aan u abuurno dhacdo muuqaal ah?
Markaa SMX West waxay dhacday bishii Febraayo, taas oo hadda dareemaysa xilli kale. Waxaan hadda wajahaynaa xaqiiqooyin cusub, gaar ahaan marka ay timaado dhacdooyinka shaqsi ahaanta ah, iyo su'aalaha ku saabsan dhacdooyinka tooska ah ee baahinta tooska ah ayaa la yimid dhacdooyin aan rabo inaan ka qeyb galo iyo dhacdooyinka aan caawinayo qorsheynta.
Jawaabta gaaban, ra'yigayga, waa inaad si adag uga fikirtaa inaad horay ugu socoto dhacdo muuqaal ah halkii aad dib u dhigi lahayd.
Dhacdooyinka dhabta ahi maaha inay noqdaan webinar webinar ah oo dusha sare leh. Qof kastaa wuu ka qulquli karaa kaamerada webka waxaana jira barnaamijyo kala duwan oo halkaas ka jira kuwaas oo si fudud u soo saari kara quudin muuqaal-muuqaal xirfad leh oo abuura dhacdo dhab ah oo firfircoon. Waxaan hadda abuuray hage si faahfaahsan u qeexaya tallaabo kasta oo lagu soo saarayo dhacdooyinka casriga ah.
Ma la mid noqon doontaa sida qofka? Maya
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad dib-u-habayn ku sameyso qaar ka mid ah yoolalkaaga iyo fikradaha waxa dhacdo onlayn ah ay noqon karto, dhacdadaada casriga ah waxay ku gaadhi kartaa dhagaystayaal ballaadhan iyada oo loo marayo qulqulka oo ay kula xidho xitaa kuwa ku hadla iyo ka qaybgalayaal badan iyada oo aan lagu xidhin xadka juqraafiga.
Wax badan oo ka yimid SMX
Soo deji nuqulkaaga bilaashka ah ee Jadwalka Wakhtiga ah ee PPC ee hadda la sii daayay hadda!
SMX Wakhtiga Dheeriga ah: Waa kan sida noocyada goobaha badan ay u maamuli karaan liisaska maxalliga ah
SMX wakhtiga dheeraadka ah: Maaraynta profiles Google My Business, faallooyinka iyo wax ka badan
Fiidiyowga: Frédéric Dubut ee Bing oo ku jira darajada asaasiga ah, dagaalka spam iyo wax ka badan
Suuqgeynta macluumaadka ku salaysan iimaylka ee SMBs